Maraykanka oo muwaadiniintiisa ugu digey inay u safraan wadamo ay ku jirto somalia. – Soomaali 24 Media Network
Maraykanka oo muwaadiniintiisa ugu digey inay u safraan wadamo ay ku jirto somalia.
Dawaladda wadanka Maraykanka oo soo saartay warbixin ay kaga hadlayso wadamada caalmaka ugu halista badan ayaa muwaadiniinteeda kaga digtay inay u safraan wadamo ay ka mit tahay Soomaaliya.
Warbixintan oo ay soo saartay wasaaradda arimaha dibadda ee dalka Maraykan ayaa ahayd mid aad u dheer oo looga hadlay wadamada dunida ugu halista badan.
Warbixinta ayaa lagu soo bandhigay 35 dal oo loo aqoonsaday inay yihiin kuwa dunida ugu halista badan waqtigan lagu jiro isla markaan ay tahay in il gooni ah lagu eego la jaanqaadka dhaqdhaqaaqooda ee caalmaka intiisa kale.
Wadamadan oo ayaga qudhooda loo qaybiyey 4 heer ayaa heer walba si gooni ah looga hadlay ayadoo lagu qeexay warbixinta sida ay u sii kala halis badan yihiin.
Heerka 4-aad oo wadamada ku jira loo aqoonsaday kan ugu halista badan caalamka ayey warbixintu uga digtay inay u safraan muwaadiniinta maraykanku halka kuwa kale ee ku jira heerarka 3-aad, 2-aad iyo 1-aad loo soo jeediyey inay feejignaan muujiyaan.
Wadamada heerka 4-aad ee looga digay inay u safraan muwaadiniinta Maraykanku ayaa waxaa ka mid ah dalka Soomaaliya waxayna kala yihiin.
Somalia, South Sudan, Syria, Venezuela, Yemen, Haiti, Iran, Iraq, Libya, Mali
Warbixintan ayaa ku soo aadaysa xilli hoggaanka ugu sarreeya dalka xubno ka tirsan oo uu ka mid yahay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay sitaan dhalashada dalka maraykanka ee muwaadiniintiisa uga digay inay u safraan wadamo ay ka mid tahay Soomaaliya.
Previous Barcad badeed soomaaliyeed oo lugu laayey biyaha soomaaliya ee badweynta hindiya
Next Kenya iyo Ethiopia oo ka wada hadlay arimo ku saabsan Dekadaha dalka Soomaaliya.